IT and Mobile Archives - The Lobby
iOS 14 မှာအသစ်ပါဝင်လာတဲ့ Feature အသစ်များ
In: IT and Mobile, Knowledge
ပြီးခဲ့တဲ့ WWDC 2020 ပွဲမှာပြသသွားခဲ့တဲ့ iOS 14 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောပြသွားမှာပါ၊သဘောကျတယ်ဆိုရင် share ပေးသွားပါဦးခင်ဗျ။ iOS 14 တွေဟာ iPhone 6s, SE နဲ့နောက်ပိုင်း model တွေမှာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲဒီတော့ iOS 14 မှာ အသစ်ပါဝင်လာတဲ့ functions အသစ် 100 ကိုစတင်ပြောပါမယ်။ (1) iOS မှာ Widget တွေပါဝင်လာခဲ့တာဟာ ဆယ်စုနှစ်တစုနီးပါးရှိနေပါပြီ။ သို့ပေမယ့် ဒီ iOS 14 ကျမှာ Widgets တွေဟာပိုပြီးအသုံးဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ််၊ Widgets တွေကို Home Screen ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာမဆိုထားနိုင်ပြီး Information လဲအရင်ကထက်ပိုပြီး ပြသပေးနိုင်ပါတယ်။Continue Reading
Apple မှ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းမရှိတော့တဲ့ iPhone, iPad, Apple Watch နဲ့ Mac Model များ
ကဲ ဒီနေ့ကတော့ ခေါင်းစဥ်အတိုင်းပါပဲ၊ Apple ကနေ Production ရပ်ပစ်လိုက်တဲ့ Device တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် .. Production ရပ်ပစ်လိုက်တဲ့ Device တခုချင်းစီတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေရင် ပြီးတော့မှာ မဟုတ်လို့ လက်ရှိရောင်းချနေတဲ့ Device List ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ၊ ဒီ Device တွေကလွဲ ကျန်တဲ့ Device အကုန် Production ရပ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်၊အရင်ဆုံး iPhone နဲ့စလိုက်ရအောင် လက်ရှိ Apple မှထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ iPhone များ – iPhone SE 2020 ($399) – iPhone XR ($599) – iPhone 11 ($699) –Continue Reading
မသိမဖြစ် သိထားသင့်သည့် မိုဘိုင်းဖုန်း အော်ပရေတာကုတ်များ
In: IT and Mobile, Knowledge, News
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသူတွေအတွက် အသုံးဝင်လှတဲ့ ပြည်တွင်းက အော်ပရေတာတွေရဲ့ ကုတ်တွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ အော်ပရေတာရဲ့ ကုတ်နံပါတ်တွေကိုဦးစွာရိုက်ပြီး ဖုန်းခေါ်တဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်ကာ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sim Card မှတ်ပုံတင်ပြီး/မပြီး စစ်ဆေးသည့်ကုတ်များ MPT – *601# Ooredoo – *13362# Telenor – 9793*3# Mytel – *966# (နံပါတ် ၆ ကိုရွေးပြီး။ နံပါတ် ၂ ကို ထပ်ရွေးပါ။) ဖုန်းနံပါတ်စစ်ကုတ်များ MPT – *88# Ooredoo – *13362# Telenor – *97# Mytel –Continue Reading
Android သုံးသူများအတွက် အန္တရယ် ရှိသော Application များ
Samsung ကနေ Huawei အထိ ကမ္ဘာမှာ လူတွေနှစ်ခြိုက်စွာ အသုံးပြုနေတဲ့ Android စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ် အမြောက်အမြား ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ သင်ဟာ Android စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ App တွေကို ဖုန်းထဲမှာ သွင်းထားမိတယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးဖျက်ပစ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။Sophos မှ သုသေသီများက အသုံးပြုသူများထံမှ ငွေပေါင်းများစွာကို လိမ်ညာရယူနေတဲ့ App များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။ ယင်း App များက အမြည်းအဖြစ် သုံးပြီးရင် မဖြစ်မနေ Subscription မလုပ်လို့ မရတော့တဲ့ App တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ စိုးရိမ်စရာကောင်းတာကတော့ ယင်း App တွေကို အကြိမ်ရေ သန်း 600Continue Reading
KineMaster 4.11.16 Modded APK
In: IT and Mobile
Kine Master modded Vip လိုခ်င္သူမ်ားအတြက္ Link ခ်ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာContinue Reading
NetworkManager isaprogram for providing detection and configuration for systems to automatically connect to networks. NetworkManager’s functionality can be useful for both wireless and wired networks. For wireless networks, NetworkManager prefers known wireless networks and has the ability to switch to the most reliable network. NetworkManager-aware applications can switchContinue Reading